Israa'iil oo beenisay inay basaaseysay Aqalka Cad ee Mareykanka - BBC News Somali
Image caption Donald Trump iyo Benjamin Netanyahu
''Way adagtahay inaan aamino arrintan, sababtoo ah xiriirkayga ku aaddan Israa'iil aad buu u wanaagsanaa'' ayuu yiri Trump, isagoona soo xiganayay ka bixitaankii heshiiskii niyukleerka ee Iran iyo go'aankii muranka badan dhaliyay ee maamulkiisa uu safaaradda Mareykanka ugu soo raray Quddus.
''Ma aaminsani warkaasi. Waxkasto waa suuragal balse ma aaminsani''.
Xisbullah oo gantaallo ku weerartay Israa'iil
Maxaa lagu heystaa xaaska ra'iisul wasaaraha Israa'iil?
Maxaa warbixinta lagu sheegay?
Eedeymaha Israa'iil loo soo jeediyay ayaa waxaa lagu daabacay wargeyska Politico khamiistii shalay ahayd.
Teleefoon Caalami ah oo loo yaqaano StingRays ayaa la sheegay in laga helay meel aan sidaa uga fogeyn madaxtooyada Mareykanka iyo goobo kale oo muhiim ah oo ku yaalla Washington.
Aaladahaan ayaa waxay u shaqeeyaan sida Mobeelada, waxay sheegaan macluumaadka goobta uu qofka ku sugan yahay iyo xitaa macluumaadka kale ee wicitaannada.
Mid ka mid ah saraakiishii hore ayaa wargeyska u sheegay in aaladda StingRays ay u badan tahay in loogu talagalay in lagu basaaso Madaxweyne Trump. Waxa uu sarkaalka sheegay inaysan cadayn inay ku guulaysteen basaasnimadooda.
FBI oo baaritaan ku sameeysay halka ay ka yimaadeen aaladaha. ''Way iska caddayd in Israa'iil ay ka dambeysay'', ayuu Politico u sheegay sarkaalkaan hore.